Kansarka naasaha: caajis oo rajeynaya dhirta 6 bogsashada - TELES RELAY
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB • DARYEELKA CAAFIMAAD • daryeelka Kansarka naasaha: cocktail rajo leh ee dhirta 6 bogsiisay
Kansarka naasaha: cocktail rajo leh ee dhirta 6 bogsiisay
Khudradda, miraha, dhirta iyo xididdada dhirta waxay noqon karaan waxyaabaha mustaqbalka ah iyada oo aan waxyeellooyinka ka imanayn ee daaweynta kiimikada kansarka naasaha.
Dhowrso kiimiko dabiici ah oo dabiici ah? Daraasad ayaa lagu daabacay Wargeyska Kansarka muujinayaa is biirsaday ee lix walxaha cuntada super - khudaarta, miraha, oo dhir udgoon iyo xididada dhirta - awooday inay u disho 100% ka mid ah unugyada kansarka naasaha ee tijaabada ah, iyo in, aan sumoobo in unugyada caadiga ah. Natiijooyinkani waxay tilmaamayaan waddooyinka ballan qaadaya daaweynta cusub iyadoon wax saameyn ah yeelan. Kansarka naasku waa mid ka mid ah sababaha ugu badan ee geerida dumarka adduunka oo dhan. Sannad kasta, dumarka 1,3 million waxay ogaadeen inay saameynayaan, iyo in ka badan 450 000 u dhintaan. Haddii tirada kansarka naasaha sii wadaan in ay ku eegan kici, in yar by yar, waxaan u maareeyaan si dawayn fiican in dalalka reer galbeedka ugu yaraan.
Sidaas, in Franceiyada oo loo mahadcelinayo baaritaanyada hore iyo gaar ahaan daaweynta cusub ee sii kordheysa ee loo yaqaan 'tumor', ku saabsan 80% dumarka ayaa la daaweynayaa. Si kastaba ha noqotee, sida cilmi-baarayaasha Mareykanka baadhitaankani tilmaamayo, daaweynta dawooyinka kemotherabi ama radiotherapy ayaa abuuraya saameyno badan oo halis ah iyo mararka qaarkood la kulmaan iska caabin. "Run ahaantii," ayuu yidhi Dr. Raj, oo hogaaminaya daraasaddan, "mid ka mid ah sababaha ugu horreeya ee keena soo noqoshada kansarka naasaha iyo dhimashadu waa koox yar oo ah unugyada qanjidhada kansarka ee ka soo baxa teraabiyada. Unugyadaas, inta badan waa kuwo badan oo u adkaysta, waxay leeyihiin awood ay ku dhaliyaan burooyin cusub, sidaas darteed waa lagama maarmaan in la hormariyo habab cusub, oo wax ku ool ah oo nabadgelyo leh ee daaweynta kansarka naasaha iyo ka hortagga. "
Burburka buuxa ee unugyada kansarka
Kooxda cilmi-baarista waxay doonayeen si ay u tijaabiso sifooyinka walxaha dhirta lagu ogaa qaarkood laga helaa cuntooyinka sida broccoli, canab, tufaax, tofu ama xidid timirta. Baaritaanadii u danbeeyay waxay iftiimiyeen tayada antioxidant, anti-bararka ama anti-proliferative cuntooyinka super qaar ka mid ah oo aan abid muujinaya dabargoynta dhamaystiran oo unugyada kansarka. Ka dib markii laga bilaabo waayo-aragnimada ay toban phytochemicals, Dr. Raj iyo kooxdiisa ayaa loo aqoonsaday YAQINSAN lix super-walxaha curcumin ka timirta, isoflavones soy (genistein), indole-carbinol cruciferous 3 ( Kaabashka, broccoli ...), C-phycocyanin of spirulina, Cinab resveratrol iyo quercetin, miro iyo khudaar flavonoid iyo shaaha.
Sidaa daraadeed lixda jimicsi ayaa la isku dayay hal mid ah unugyada kansarka, halka imtixaan kale la barbardhigay saamayntooda markii ay si caadi ah u ururiyeen super-koktarta. Qeyb ahaan, maaddooyinka waxay caddeeyeen inayan waxtar lahayn, laakiin, isku darka, waxay ku guuleysteen in ay joojiyaan koritaanka unugyada kansarka in ka badan 80% ka dib maalinta 6e iyo inay xaddidaan hijroodkooda. Ugu dambeyntii, geedi socodka dhimashada unugyada ayaa dhacay, ugu dambeyntii waxay horseedday in la waayo la'aanta 100% unugyada kansarka iyada oo aan waxyeello u geysan unugyada caafimaadka qaba. Kooxda cilmi-baarayaasha ayaa sidoo kale xusay in mitir soo baxa la yarayn karo.
Inkastoo ay jiri karto 75 boqolkiiba kansarrada marka lagu daro 2030 - gaar ahaan dalalka saboolka ah - natiijooyinka ugu horreeya waa rajo fiican: waxay muujinayaan awoodda awoodda dhirta ee isku dhafan ee isdhexgalka iyo kahortaga kansarka naasaha. Daraasado badan ayaa weli lagama maarmaan u ah inay sii kordhaan, malaha hal maalin, si loo daweeyo nooca cusub, dabiiciga ah iyo wax saameyn la'aan ah.
Gabdhaha yaryar ee gaaban oo ay la socdaan cellulite: yaa la kulma dhibaatadan?
"Nidaamka difaaca ayaa fure u ah daaweynta kansarka"
India: Helitaanka hab lagu ogolaanayo garsoorka in uu sii wado maqalka kiiskiisa kaddib markii uu ka fariistay: SC ilaa UP | India News
Luqad oo sharaf leh: Makron ma guulaystay? - VIDEO
Sharci-dejinta iyo Madaxweynaha Nabil Karoui weli hogaaminaya, 3ich Tounsi on podium
Faallooyinka iPhone 7
Karidja Coulibaly: Naxariis, macaan, caqli, halkan waa sababta xaaskii dhowaan Ahmed Sylla u sameeyay goobta - Abidjanshow.com
Video dheeraad ah1,484